Building Information Modeling(BIM) Technology နဲ့ပတ်သတ်သည်များကို စနစ်တကျသင်ကြားပေးသွားပါမည်။
Revit MEP 2018 Professional Course
BIM Course integration with midas GEN
ဒီသင်တန်းက Revit Structure၊Tekla Structure တို့နဲ့ integration လုပ်တာ အပါအ၀င် Midas Gen ရဲ့ BIM integration capability ကို introduce လုပ်ပေးတဲ့ အတန်းလည်း ရှိပါတယ်။ building information workflow အတွက် building data တွေကို ဘယ်လို transfer လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သင်ရမယ်။
သင်တန်းမှာ level သုံးခုပါဝင်ပါမယ်။
A simple 3D model of2bay frame
Simple Plant Structure
Web opening detail analysis
Two column hammerhead pier
Basic Structural Analysis using FEA software
Integration with Revit Software
Integration with Tekla Software
midas Gen link for Revit Structure
midas Gen link for Tekla Structure
Bonus Video: Basics structural analysis using FEA software
Navisworks BIM/Plant Course- Level-1
Autodesk Navisworks Online Course Level-1 and Level-2
ပထမသုံးလတဖြတ်အနေနဲ့ Level-1 and2ကို အရင် ဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ Curriculum ကိုတော့ Post Photos ထဲမှာ အပြည့်အစုံ ရေးထားပါတယ်။
အခြေခံအနေနဲ့ Autocad ကိုတော့ တတ်ထားရပါမယ်။
Online Course Fee for Level-1 : 50,000 Kyats
Online Course Fee for Level-2 : 100,000 Kyats
Online Platform ကိုတော့ www.elearning-myanmar.com မှာတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ လက်ရှိ User 1041 ယောက်ရှိပြီး Online Course တက်ရောက်နေသူ ၃၅၂ ယောက်ရှိပါပြီ။
လေ့လာရန် ဆရာအင်ဒရူးရေးထားတဲ့ Guide book+ Step by Step training video တွေအပြင် Real World Project ဖိုင်တွေနဲ့ ကျောရိုးပြုပြီး သင်ပေးထားပါတယ်။ Chapter တွေတိုင်းအတွက် Course Assessment တွေဖြေပေးရပါမယ်။ စုစုပေါင်း ဖြေဆိုမှုကို Assessment တိုင်းအတွက် သုံးကြိမ်သာ ဖြေဆိုနိုင်ပြီးတော့ သင်တန်းအပြီးမှာ ၇၅%ကျော်တဲ့ ရမှတ်ကို ရရှိမှသာ Certificate ရပါလိမ့်မယ်။
နယ်ကနေ ရန်ကုန်လာပြီး တက်ရောက်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေအားလုံး အဆင်ပြေမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ Software အတွက် DVD နှစ်ချပ်ကိုတော့ အောက်ပါ မြို့တွေကို ပို့ပေးပါ့မယ်(ပို့ခ ၅၀၀၀ကျပ်ထပ်မံကျပါတယ်)
သင်တန်းအတွက် ကြာမြင့်ချိန်ကတော့ နာရီ ၈၀လောက် အချိန်ပေးရပါမယ်။ Assessment တွေအားလုံးကို အွန်လိုင်းသင်တန်း တက်ရောက်ချိန်က စတင်လို့ ၆လအတွင်း ပြီးအောင် ဖြေဆိုမှသာ Certificate ရပါမယ်...။ သင်တန်းတက်ရောက်နိုင်ခွင့်ိကိုလည်း ခြောက်လအထိ (ရုံးတဖက်နဲ့ သင်တန်း မတက်နိုင်သူတွေအတွက်)ဖွင့်ပေးထားလို့ အဆင်ပြေကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
သင်တန်းတက်ရောက်လို့ မတတ်မြောက်ရင်၊ Online Course လို့ပြောပြီးတော့ edx တို့ Alison တို့လို MOOC(Massive Open Online Course) အခြေခံထားမဟုတ်ပဲနဲ့ လုပ်စားတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေရင် အတိအလင်း လာရောက်ရေးသား အကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်။
Course Fee ကို Bank Transfer ကနေ လုပ်နိုင်သလို လိပ်စာအတိုင်းလည်း လာရောက် သွင်းနိုင်ပါတယ်။
**** ငွေကြေး အဆင်မပြေသူ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအတွက် Level သုံးခုစလုံးအတွက် ငွေကျပ်ငါးသောင်း ကျပ်ကို သင်တန်းအပြီးအထိ တက်ရောက်ပါမည်ဟု ခံဝန်ထိုးပြီး တက်နိုင်ပါတယ်(အခမဲ့ဆိုရင် လူတွေက တန်ဖိုးမထားကြတာများလို့ ဒီလိုလုပ်တာပါ) သင်တန်းပြီးတာနဲ့ ငါးသောင်းလုံး ပြန်ပေးပါ့မယ်။ သင်တန်းကို အပြီးအထိ တက်ပြီး လေ့လာဖြစ်အောင် တွန်းအားအနေနဲ့လုပ်ရတာကို နားလည်ပေးပါ။
Bank Account ကို Message Box ကနေ တက်မယ့်သူများ မေးပါ။
Ko Andrew(Chief Instructor)
This course teaches users the basics of Revit Architecture by producingacomplete building design from start to finish. Written from the perspective of brand new users, Revit for Beginners provides an introduction to Building Information Modeling (BIM) and 3D architectural design using Revit. This course walks you through the creation ofacontemporary, two story, residential building model, while providing in-depth explanations of the tools used along the way. You'll learn how to create walls, floors, windows, roofs, doors, floor plans, as well as custom 3D camera views, and even generate photorealistic 3D renderings. After completing the course you'll have the skills you need to comfortably begin working on your own designs with Revit Architecture.
ဒီသင်တန်းကို တက်ရောက်ဖို့ အတွက် Basic Computer Skill တက်မြောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ internet ကို ကောင်းမွန်စွာ သုံးတတ်သူ(facebook လောက်သုံးတတ်၊ gmail လောက်သုံးတတ်ရုံနဲ့ မရပါ) ဖြစ်ရပါမယ်။